Asikhulise ingane yowoHlanga njengomphakathi - Bayede News
AboHlanga njengezinye izizwe babe nendlela yokukhulisa izingane nabasha babo. Lezi zindlela zabe zinenhloso eyodwa nje vo, ukwakha ingane lena. Lezi zindlela zabe zifundisa noma zihlonipha ingane ngalokho ekumele ikulindele ekukhuleni kwayo. Isimanga kwabe kuwukuthi wonke umuntu okhulisa ingane wayeqikelela ukuthi yini engena emqondweni wayo nangasiphi isikhathi.
AboHlanga babazi ukuthi ingqondo yengane ifana nekhasi elingabhalwe lutho okuba zifundiso ezize sitshale okuthile, okuhle noma okubi. Ngokwazi lokhu aboHlanga babeqikelela ukuthi ekufundiseni ingane kusuka isencane basebenzisa ubuciko obahlukene.
Okunye okwabe kuqapheleka wukuthi ukufundisa ingane kwabe kuhambisana nosikonkolo lwabo.
Khona lapho kwabe kuxhumene nemvelo eyabe ibazungezile. Ubufakazi obukhona buveza ukuthi lendlela yabe isebenza njengoba yakha abantu kanjalo nemiphakathi enamandla nenamaphupho ezinto ezinkulu. Okunye okwabe kuqapheleka kulezi zifundo yindlela enobuchule yokusebenzisa ulimi nolwabe luqukethe umlando wayo ingane, umndeni, umphathi nesizwe. Kulezi zifundo ingane yabe ifunda ngakho konke. Kube ngalesi sizathu ElaboHlanga namuhla lethula amakhasi azobe ekhuluma nezingane ngqo.
Kulamakhasi sizobe sikhuluma cishe ngakho konke, kusuka kwimvelo, amasiko, izisho, ukuchazwa kwamagama, izinganekwane ngisho nomlando imbala. Konke lokhu siyokubhala ngendlela elula ukuze ingane íkugwinye kahle.
Zimkhalele owayenguMengameli ngezinsolo zokushushumbisa
Ezinye izindatshana ziyoxoxwa kusetshenziswa ifuzamuntu uNgqondo nabanye abazoba yingxenye yezifundo zethu ukuze konke kube lula. Konke lobu buhle bungephelele ngaphandle komzali, okungaba ngumzali wayo ingane noma umzali onguthisha. Yikho laba bazali sibamema ukuba babe ingxenye yalokhu esikwenzayo ngokuthi bedlulise iphephandaba ezinganeni noma baxhumane nathi basicebise ngezihloko abafisa sizibheke noma bona qobo babhale ukuze zibanjwe zisemaphuphu.
Bayede News Jan 14, 2022